Biographien Projekt – Myanmar-Institut e.V.
Welcome to the website of the Biographies Project of the Myanmar Institute. This is an interactive website, in which biographies of people from Burma/Myanmar are presented. The goal is to paintadiverse picture of Myanmar’s society – historically and contemporarily. It is intended to present life careers of – more or less known – persons who have passed away together with peple from today fromavariety sectors of society.
The contributions will be published in English and Burmese but can be submitted in German as well. The projects aims at intensifying the exchange of information and perceptions on Burma/Myanmar between German speaking countries and Myanmar . Therefore, each contribution before being published will be read and commented byamember of the project –aMyanmar contribution byaGerman speaking person and vice versa.
To realise this ambitious task, more contributors are invited to join the project. Please contact the moderators in Germany Rodion Ebbighausen (ebbighausen@gmx.net) or Hans-Bernd Zöllner (habezett@t-online.de) or in Myanmar Thin Thin Aye (lwinlwinmon111@gmail.com) or Lwin Lwin Mon (lwinlwinmon111@gmail.com).
Each biography should contain between 10,000 and 30,000 characters (2,500 to 4,000 words). A picture of the person portrayed should be made available. Further pictures to illustrate the text are welcome.
Here are some recommendations for the structure of the contributions (they are not mandatory):
Introduction („Teaser“ – short indication of what is particularly interesting about the person)
Written Curriculum Vitae, the course of life
Objectives and achievements of the person presented
An assessment by the author of the biography
Sources/Bibliographical information, main Sources (literature, interviews etc.)
All readers are invited to write comments on the biographies. Critical and complementary remarks are equally welcome!
မြန်မာအင်စတီကျု၏ အတ္ထုပတ္တိများ ပရောဂျက်မှ ကြိုဆိုပါသည်။ ဤဝက်ဘ်ဆိုဒ်သည် မြန်မာနိုင်ငံမှ လူပုဂ္ဂိုလ်များအကြောင်း အတ္ထုပတ္တိများကို သက်ဝင်လှုပ်ရှားဖော်ပြမည့် ဝက်ဘ်ဆိုဒ်တစ်ခု ဖြစ်ပါသည်။ ရည်ရွယ်ချက်မှာ မြန်မာ့လူ့အဖွဲ့အစည်း၏ အတိတ်သမိုင်းအရရော၊ မျက်မှောက်ခေတ်ကာလအရပါ မတူကွဲပြားသည့် ရုပ်ပုံကားချပ်ကို ဆေးခြယ်ပြသလိုခြင်းဖြစ်ပါသည်။ လူ့အဖွဲ့အစည်း၏ ထောင့်ပေါင်းစုံမှ လူသိများသည့်၊ လူမသိသေးသည့်၊ ကွယ်လွန်ပြီးဖြစ်သည့်၊ ယနေ့ သက်ရှိထင်ရှားရှိနေဆဲဖြစ်သည့် ပုဂ္ဂိုလ်များ၏ ဘ၀ဇာတ်ကြောင်းကို တင်ဆက်သွားရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။
ရေးသားပေးပို့မှုများကို အင်္ဂလိပ်၊ မြန်မာ နှစ်ဘာသာဖြင့် ဖော်ပြမည်ဖြစ်ပြီး၊ ဂျာမန်ဘာသာဖြင့်လည်း ရေးသားပေးပို့နိုင်ပါသည်။ ပရောဂျက်၏ ရည်ရွယ်ရင်းမှာ မြန်မာနိုင်ငံအကြောင်း သတင်းအချက်အလက်များနှင့် မြန်မာနိုင်ငံအကြောင်း သိမြင်နားလည်မှုများကို ဂျာမန်ဘာသာစကားပြောသည့် နိုင်ငံများနှင့် မြန်မာနိုင်ငံအကြား နှီးနှောဖလှယ်မှု ပိုမိုတိုးပွားလာစေရန် ဖြစ်ပါသည်။ ထို့အတွက် ရေးသားပေးပို့ချက်များကို တရား၀င်ဖော်ပြခြင်းမပြုမီ၊ ပရောဂျက်တွင် ပါ၀င်သည့် အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးက ရေးသားပေးပို့မှုကို ဖတ်ရှုပြီး၊ မှတ်ချက်ပြုမည်ဖြစ်ပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံမှ ရေးသားပေးပို့မှုကို ဂျာမန်ဘာသာစကားပြောဆိုသည့် ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦး၊ အခြားရေးသားပေးပို့မှုများကိုလည်း အပြန်အလှန်အားဖြင့် ဖတ်ရှုကာ မှတ်ချက်ပြုသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။
ရည်မှန်းထားသည့် လုပ်ငန်းများကို အကောင်အထည်ဖော်နိုင်ရန်အတွက် ရေးသားပေးပို့မည့် ပုဂ္ဂိုလ်များကို ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်။ ဂျာမနီနိုင်ငံရှိ အဖွဲ့ဝင်များဖြစ်သည့် Rodion Ebbighausen (ebbighausen@gmx.net) ၊ သို့မဟုတ် Hans-Bernd Zöllner (habezett@t-online.de) ၊ မြန်မာနိုင်ငံအတွက် ပါမောက္ခ ဒေါက်တာ သင်းသင်းအေး (thinthinaye.dr5@gmail.com) နှင့် ပါမောက္ခ ဒေါက်တာ လွင်လွင်မွန် (lwinlwinmon111@gmail.com) တို့ကို ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။
အတ္ထုပတ္တိတစ်ပုဒ်လျှင် အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် စာလုံးရေ (၂၅၀၀) မှ (၄၀၀၀) အထိ ပါ၀င်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။ အတ္ထုပတ္တိပိုင်ရှင်၏ ဓာတ်ပုံပါ၀င်ရပါမည်။ (ရေးသားသူ၏ ဓာတ်ပုံ မဟုတ်ပါ။) ရေးသားထားသည့် စာကို အထောက်အပံ့ဖြစ်စေရန် ဖော်ပြမည့် ပုံများလည်း ထည့်သွင်းနိုင်ပါသည်။
အတ္တုပတ္တိကို ရေးသားရာတွင် အောက်ဖော်ပြပါ ပုံစံအတိုင်း ရေးသားပေးပို့နိုင်ပါသည်။ (မဖြစ်မနေ ဤပုံစံအတိုင်းဟု မဆိုလိုပါ။)
၁။ မိတ်ဆက် (“အကြောင်းအရာ” မိတ်ဆက်။ ။ အတ္ထုပတ္တိပိုင်ရှင်အကြောင်း အထူးတလည်စိတ်ဝင်စားဖွယ်အချက်ကို ဖော်ပြခြင်း။)
၂။ ကိုယ်ရေးရာဇဝင်၊ ဘဝဇာတ်ကြောင်း
၃။ ဖော်ပြပါ ပုဂ္ဂိုလ်၏ ရည်မှန်းချက်များနှင့် အောင်မြင်ရရှိမှုများ
၄။ အတ္ထုပတ္တိရေးသားသူ၏ ချင့်ချိန်ဆုံးဖြတ်သုံးသပ်ကြည့်ခြင်း
၅။ ကျမ်းကိုးစာရင်း၊ အဓိက ကျမ်းကိုးရင်းမြစ်များ (စာအုပ်များ၊ အင်တာဗျူးများ စသည်)
စာဖတ်သူအားလုံးအနေဖြင့်လည်း အတ္ထုပတ္တိများကို ဖတ်ရှုပြီး၊ မှတ်ချက်များ ရေးသားနိုင်ပါသည်။ ဝေဖန်အကြံပြုချက်များ၊ ထောက်ပြအကြံပြုချက်များကို ကြိုဆိုလျက်ရှိပါသည်။
Willkommen auf der Seite des Biografien-Projektes des Myanmar-Instituts. Hier entsteht eine interaktive Seite, in der einzelne Biografien von Personen aus Birma/Myanmar vorgestellt und kommentiert werden können. Im Laufe der Zeit soll so ein facettenreiches Bild der Gesellschaft des Landes in Geschichte und Gegenwart entstehen. Es geht also darum, außer den bedeutsamen Frauen und Männer der Vergangenheit auch Menschen von heute aus möglichst vielen gesellschaftlichen Bereichen der Gegenwart vorzustellen.
Die Beiträge werden auf Englisch und Birmanisch veröffentlicht, können aber auf Deutsch eingereicht werden. Das Projekt soll dazu dienen, den Austausch von Informationen und Ansichten über die vielfältigen Lebenswelten Birmas/Myanmars zwischen Interessierten aus dem deutschsprachigen Raum und Myanmar zu intensivieren. Aus diesem Grunde wird jeder Beitrag vor der Veröffentlichung von einem anderen Mitarbeiter am Projekt kommentiert – Beiträge aus Myanmar von einem Deutschsprachigen und umgekehrt.
Damit dieses anspruchsvolle Vorhaben durchgeführt werden kann, sind weitere Mitarbeiter eingeladen, sich an dem Projekt zu beteiligen. Anfragen und Vorschläge können gerichtet werden an die Moderatoren auf beiden Seiten, Rodion Ebbighausen (ebbighausen@gmx.net) oder Hans-Bernd Zöllner (habezett@t-online.de) in Deutschland und Thin Thin Aye (lwinlwinmon111@gmail.com) oder Lwin Lwin Mon (lwinlwinmon111@gmail.com) in Myanmar.
Die Beiträge sollten zwischen 2.500 und 4.000 Worten enthalten. Ein Bild des Portraitierten sollte zur Verfügung gestellt werden. Weitere Bilder zur Illustration des Textes sind erwünscht.
Hier sind einige Empfehlungen zur Gliederung der Beiträge. Sie sind nicht verbindlich:Einleitung („Teaser“, Kurzer Hinweis darauf, was an der Person besonders interessant ist)
Kurzer Lebenslauf (Biographical Sketch – die „nackten“ Lebensdaten, soweit bekannt)
Ziele und Leistungen aus der Perspektive der Person, über die geschrieben wird
Beurteilung(en) aus der Sicht der Autorin/des Autors
Kurze Angaben zu Quellen oder weiterführender Literatur
Alle Leserinnen und Leser sind herzlich eingeladen, Kommentare – gerne auch kritische – und Ergänzungen zu den Beiträgen abzugeben.
Ba Htay (1906-2000)
Bao Youxiang (born 1949)
Daw Kyan (1918-2019)
Daw Khin Kyi (1912-1988)
Htein Win (born 1946)
Kathleen Thein (born 1962)
Saw Ba U Gyi (1905-1950)
Saw Phar Dae (born 1945)
Sein Bo Tint (1938-1994)
U Thuzana (1948-2018)
Khin Maung Din (1931-1987)
Phyu Ei Thein (born-1974)
Professor Tun Aung Chain (born-1933)
အောင်စိုးမင်း (၁၉၇၀ မွေးဖွား)
သခင်စိုး (၁၉၀၅ – ၁၉၈၉)
စောဖားဒေး (မွေးသက္ကရာဇ် ၁၉၄၅ခုနှစ်)